Video: Usoro 5 iji mee ka mmekọrịta mmadụ na ibe ya ka mma | Martech Zone
Ndị enyi anyị karịa Agbaze mmiri kpebiri inwe obere ntụrụndụ na Mọnde (na Cindo de Mayo) wee kee obere vidiyo a dị egwu maka ikiri ihe ụtọ anyị. Were ezumike ma lelee!
Usoro 5 iji mee ka mmekọrịta mmadụ na ibe ya ka mma
Kọwaa ọwa gị
Kọọ Ọtụtụ Akụkọ
Emela iwe ma ọ bụrụ na otu n’ime akụkọ gị nwụọ
Lelee post blog na-esote:
Nzọụkwụ 5 iji mee ka mmekọrịta mmadụ na ibe ya ka mma
Meltwater bụ onye nkwado nke Martech Zone na anyị na-eji ha toolets nyochaa mkparịta ụka online nile nke ahịa technology ụdịdị dị iche iche. Jide n'aka na ịlele Meltwater's ngwa nlekota oru.
Tags: akara cowlingbazee mmiriprpr vidiyommekọrịta ọhanezemmekọrịta ọhaneze vidiyo